Programmer's Diary: May 2007
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 9:09 PM0comments
အစ်ကိုအောင် ကြိုတင်ငှားထားသော တိုက်ခန်းသို့အရောက်တွင် စကားပြောခန်း
(အထုပ်အပိုးများ ကိုယ်စီချပြီး လှည့်ပတ်ကြည့်ရန်။ ထို့နောက် ထိုင်ကာ စကားပြောရန်)
အစ်ကိုအောင် - ကဲ ရောက်ပြီ .. ဒါ မင်းတို့နေရမယ့် တိုက်ခန်းပဲ။
ရှက်ကီ - ဟာ .. မဆိုးဘူးပဲ သန့်လို့ပြန့်လို့။
အစ်ကိုအောင် - အဲဒါက မင်းတို့မနေခင်ပါကွာ။ မင်းတို့ နေပြီး ၂လ၃လကြာရင် ဖုန်အလူးလူးနဲ့ဖြစ်နေမှာ ငါမြင်ယောင်သေးတယ်။
ချက်တီ - အင်း .. ဒီအတိုင်းဆို အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားရမလို ဖြစ်နေပြီ။
ဘတ်တီ - ဘာလဲ ဆေးမစားမီပုံနဲ့ ဆေးစားပြီးပုံလို ယှဉ်ပြထားမလို့လား။
ချက်တီ - အစ်ကိုအောင် ကျွန်တော်တို့ကို အင်တာနက်အမြန်လျှောက်ပေးဦးနော်။
ရှက်ကီ - ဒီကောင်က အင်တာနက်ကို ညအိပ်ရာဝင်ရင်တောင် ဖက်အိပ်ချင်တဲ့ကောင်။ မင်း ဒီလောက် ရန်ကုန်မှာ ချက်လာတာ မညည်းငွေ့သေးဘူးလား။
ချက်တီ - ရှက်ကီ .. ခင်ဗျားလည်း ဒီလောက် ရန်ကုန်မှာ ဘီယာစတေရှင်တကာလှည့်သောက်လာတာ မညည်းငွေ့သေးဘူးလား။ အခုလည်း လေဆိပ်က သောက်ဖို့ ၀ယ်လာသေးတယ်။
ဘတ်တီ - အစ်ကိုအောင်ရေ .. ချက်တီအတွက် အင်တာနက်အရေးကြီးသလို ကျွန်တော့်အတွက်လည်း ဘောပွဲအရေးကြီးတယ်။ ဒီစင်္ကာပူမှာ ကေဘယ်တီဗီနဲ့မှ ဘောပွဲကြည့်လို့ရတယ်ဆို။
အစ်ကိုအောင် - အေးပါကွာ။ မင်းတို့ လိုချင်တာ ငါလျှောက်ပေးမယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ (ခဏနားပြီး ပြောရန်) ဘီလ်တော့ မှန်မှန်ဆောင်မှ ရမယ်နော်။
ဘတ်တီ - မပူပါနဲ့ အစ်ကိုအောင်ရယ်။ ဒီစနေနေ့ည ပွဲကောင်းတယ်။ အာကြီးနဲ့ မန်ယူကန်မှာ။ အာကြီးတစ်ပွဲနိုင်တာနဲ့ အစ်ကိုအောင် ကေဘယ်တီဗီဘီလ်ကို ဆောင်ဖို့ လုံလောက်သွားမှာဗျ။
သီတာ - ဘာရယ် အာကြီးနဲ့ မန်ယူ.. ဟုတ်လား။ မန်ယူကတော့ သိပါတယ်.. မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်။ ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်အရင်က ကစားတဲ့အသင်း မဟုတ်လား။ တို့က မန်ယူ Fan လေ။ ရော်နယ်လ်ဒိုဆို ခရေဇီပဲ။ ဒါနဲ့ အာကြီးဆိုတာ ဘာလဲ။
ရှက်ကီ - အာကြီးဆိုတာ အာဆင်နယ်ကို ပြောတာလေ။ ဘာဘူဆိုတာက လစ်ဗာပူးကို ပြောတာ။ မြန်မာ ဝေါဟာရအသစ်တွေပေါ့။
အစ်ကိုအောင် - ဘာရယ် .. သီတာက ရော်နယ်လ်ဒိုကို ခရေဇီပဲ ဟုတ်လား။ ဒီ သွားခေါခေါနဲ့ ကတုံးကြီးကိုများ။
ဘတ်တီ - အဲ.. မဟုတ်သေးဘူးလေ.. မှားနေပြီ.. မန်ယူက ရော်နယ်လ်ဒိုနဲ့ အေစီမီလန်က ရော်နယ်လ်ဒို မတူဘူး။ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတုန်းက တစ်ယောက်က ပေါ်တူဂီအသင်းက တစ်ယောက်က ဘရာဇီးလ်က ကန်တာလေ။
ချက်တီ - ဘတ်တီတို့များ သူ့အမျိုးတွေ ဘယ်သူက ဘယ်မှာနေပြီး ဘာလုပ်သလဲတောင် ဒီလောက်သိရဲ့လား မသိဘူး။
အစ်ကိုအောင် - မသိပါဘူးကွာ။ ရော်နယ်လ်ဒိုချင်းအတူတူပဲထင်လို့။ ငါ့သူငယ်ချင်း တစ်ခါကြုံဖူးသလို ဖြစ်နေပြီ။
ချက်တီ - ဘာအကြောင်းလဲ လုပ်ပါဦး။ ချက်ထဲက ဇာတ်လမ်းတွေလား။
ရှက်ကီ - ဒီကောင်ကတော့ ၀င်ရှုပ်ပြန်ပြီ။ ချက်မပါရင် မင်းစကားမပြောတတ်ဘူးလား။
ဘတ်တီ - အစ်ကိုအောင့်သူငယ်ချင်း ဘယ်လိုကြုံတာလဲ ပြောပါဦး။
အစ်ကိုအောင် - ဒီလိုကွ .. တစ်ခါက ဒီကောင် အလုပ်အင်တာဗျူး တစ်ခုသွားတော့ အင်တာဗျူးတဲ့သူက မေးတယ်တဲ့။ မင်းနာမည်က စိုးမင်းဆိုတော့ မင်း မြန်မာပြည်မှာ ကောင်းကောင်းနေ ကောင်းကောင်းစား မလုပ်ဘဲ ဘာလို့ စင်္ကာပူလာ အပင်ပန်းခံရတာလဲတဲ့။ ဒါနဲ့ ဒီကောင်က မေးလိုက်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ် အဲဒီလို နေလို့ဖြစ်မလဲပေါ့။ အဲဒီတော့ သူ့ကို ပြန်ပြောလိုက်တာက မင်းက ၀န်ကြီးအမျိုးမဟုတ်ဘူးလား တဲ့။ ဒီကောင်လည်း ကြောင်သွားပြီး ပြန်မေးရတာပေါ့။ ငါ ၀န်ကြီးအမျိုးလို့ မပြောမိပါဘူးလဲဆိုရော အင်တာဗျူးတဲ့သူက ဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ “မသိဘူးလေ .. ဟိုတလောက သတင်းထဲမှာ မင်းနာမည်နဲ့ ဆင်တူတဲ့ မင်းတို့ တိုင်းပြည်က ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်လို့” တဲ့ .. ဟားဟား..
ရှက်ကီ - အေးလေ.. သူ့ နာမည်က စိုးမင်းဆိုတော့လည်း.. မှားစရာရှားလို့ဗျာ.. တော်သေးတာပေါ့။ ကျွန်တော့်နာမည်မှာ ညွန့်တို့ ရွှေတို့ မပါတာ ကံကောင်းတာပဲ။
အစ်ကိုအောင် - ကဲ .. ငါတို့ ပြန်ဦးမယ် .. မနက်ဖြန်မှ လျှောက်လည်ဖို့ မင်းတို့ကို လာခေါ်မယ်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 2:44 AM0comments
စင်္ကာပူလေဆိပ်တွင် လာကြိုသူ အစ်ကိုအောင်နှင့် စကားပြောခန်း
(ဘတ်တီ၊ချက်တီနှင့် ရှက်ကီ သုံးယောက်သား လေဆိပ် immigration မှ အထုပ်အပိုးကိုယ်စီဖြင့် ထွက်လာရန်)
ဘတ်တီ - ဟား အစ်ကိုအောင် .. လာမှကြိုပါ့မလားလို့။
အစ်ကိုအောင် - လာကြိုမယ်ပြောထားပြီးသားပဲကွာ.. ငါမှာထားတဲ့ ပုလင်းလေးတွေရောပါလား။
(အသီးသီးကိုင်ထားသော ကြွတ်ကြွတ်အိတ်များပေါ်တွင် DFS (Duty Free Shop) ဟုရေးထားသည်များကို မြှောက်ပြရန်)
ရှက်ကီ - အစ်ကိုအောင်ရယ် .. ကျန်တာတွေ မေ့ချင်မေ့မယ်။ ရှက်ကီက ဒါတော့ မမေ့ပါဘူး။ ၀ယ်ဖို့ Quota ရသမျှ အကုန်ဆွဲလာခဲ့တယ်။
အစ်ကိုအောင် - အေး.. မင်းတို့ကို မိတ်ဆက်ပေးမယ် .. ဒါက အစ်ကို့ရဲ့ ချစ်သူရည်းစား .. ဇနီးမယားအလောင်းအလျာ .. သီတာ တဲ့
(ချက်တီ၊ရှက်ကီနှင့် ဘတ်တီ တို့ တညီတညွတ်တည်း ပြောရန်)
ဟုတ်ကဲ့ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ခင်ဗျာ။
(သီတာ ပြုံးပြပြီး ပြန်ပြောရန်)
(ချက်တီက ဘတ်တီကို ခပ်တိုးတိုးပြောရန်)
ချက်တီ - ဟေ့ကောင် အစ်ကိုအောင့် ရည်းစားအလန်းလေးက ဘိုလိုတော့နေပြီ။
ဘတ်တီ - ဒါများကွာ.. မင်းလည်း ဘိုလို ပြန်တော့လိုက်ပေါ့။
(အောက်ပါအတိုင်း ပြောပြီး သီတာ့ထံ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရန် ဟန်ပြင်ပါ)
ချက်တီ - အေး ငါချက်ထဲက အတိုင်း ဘိုလို ပြန်တော့လိုက်မယ်။ Asl pls?
(သီတာ အူကြောင်ကြောင် အမူအရာ ဖြစ်သွားရန်)
သီတာ - ဘာမေးတာလဲဟင်။
အစ်ကိုအောင် - ဒါ ချက်ထဲက ဘာသာစကားတွေ။ သီတာမသိပါဘူး။ asl pls ဆိုတာ age, sex(gender) နဲ့ location (country) ကိုပြောတာ သီတာရဲ့။
ဘတ်တီ - ဆောရီး .. ချက်တီက စတတ်နောက်တတ်လို့ပါ။
(ထို့နောက် ရှက်ကီက အခြေအနေ၀င်ထိန်းရန်)
ရှက်ကီ - ဟဲဟဲ.. လက်စသတ်တော့ ဟိုသီချင်းထဲမှာ ဆိုထားသလို မယ်သီတာခိုးတာ ဘယ်သူလဲမှတ်တယ်။ အစ်ကိုအောင်ဖြစ်နေတာကိုး.. ။
(အစ်ကိုအောင်မှ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းအမူအရာ အသံဖြင့် ပြောရန်)
အစ်ကိုအောင် - ရှက်ကီကတော့ ပြောတော့မယ်။ ကဲ .. မင်းတို့အတွက် ငှားပေးထားတဲ့ အိမ်ကို ရောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောကြတာပေါ့။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 2:23 AM0comments
စင်္ကာပူလေဆိပ်တွင် လေယာဉ်ဆိုက်ခါနီး စကားပြောခန်း
(ရှက်ကီ နှင့် ချက်တီတို့ အိပ်နေရန်။ ဘတ်တီ နိုးနေရန်)
(လေယာဉ်ပျံ စင်္ကာပူချန်ဂီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကို မကြာမီ ဆိုက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာရန်)
ဘတ်တီ - ဟေ့ကောင်တွေ အိပ်မနေနဲ့ ထကြတော့ .. စင်္ကာပူရောက်တော့မယ်တဲ့။
ရှက်ကီ - (လန့်နိုးလာပြီး အိပ်ချင်မူးတူးအသံဖြင့်) ဟင်.. ဒါဆို ဘီယာကို ရေခဲနဲ့သောက်ရတော့မှာပေါ့ ..
ဘတ်တီ - ဘာ.. ဘီယာကို ရေခဲနဲ့သောက်ရမယ်။ မင်းကို ဘယ်သူပြောလဲ။
ရှက်ကီ - ငါက စင်္ကာပူမလာခင်ကတည်းက အပီစုံစမ်းပြီးသား။ ရှက်ကီပါကွ။ ရန်ကုန်မှာကတည်းက အကျင့်ရအောင် စမ်းသောက်ကြည့်ပြီးပြီ။
ဘတ်တီ - အေး ကောင်းတယ်.. ငါလည်း စင်္ကာပူပူးအကြောင်း လေ့လာခဲ့တယ်။
ရှက်ကီ - ဘာလဲကွ။ စင်္ကာပူမှာ စင်္ကာပူပူးတွေ။ စင်္ကာပူကြွက်တွေ ရှိလို့လား။
ဘတ်တီ - မသိရင်မှတ်ထား .. အစ်ကိုအောင် ရန်ကုန်ကို ဟိုတစ်ခါပြန်လာတုန်းက ငါ့ကို ပြောဖူးတယ်။ စင်္ကာပူမှာ စင်္ကာပူပူးဆိုတာရှိတယ်တဲ့။ မင်းတို့ရန်ကုန်မှာက နှစ်လုံး၊သုံးလုံးပဲ ဆော့ကြတာ။ စင်္ကာပူမှာက လေးလုံးဆော့ကြတယ်တဲ့။
ရှက်ကီ - ဘာလဲ 4D(4 digits) ဆိုတာလား။
ဘတ်တီ - ဟုတ်တယ် .. 4D .. Toto .. S'pore Sweep .. ဘောလုံးပွဲ အစုံရှိတယ်။ ငါတော့ စင်္ကာပူရောက်တာနဲ့ တရားဝင်လောင်းကစားသမားဖြစ်ပြီ။
ရှက်ကီ - အံမယ် .. တယ်ဟုတ်ပါလား .. ဘာတဲ့ .. တရားဝင်လောင်းကစားသမားဆိုတာ လင်းစမ်းပါဦး။
ဘတ်တီ - ဒီမယ် ကိုယ့်လူ .. မင်းကို တစ်ခုမေးမယ် .. ရန်ကုန်မှာ လောင်းကစားဒိုင်ဆိုတာ တရားဝင်လား။ လောင်းကစားလုပ်တာဟာ တရားဝင်လုပ်ကြတာလား။
ရှက်ကီ - ရန်ကုန်မှာ တရားဝင်ဒိုင် မရှိပါဘူး။ ဒီလိုပဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဖုန်းဆက်လောင်းကြတာပဲ။
ဘတ်တီ - အေး .. စင်္ကာပူမှာတော့ စင်္ကာပူပူးဆိုတာ တရားဝင်ဒိုင်ပဲ။ တရားဝင်ဒိုင်ကနေ လောင်းတာဟာ တရားဝင်တယ်။ ဒါကြောင့် ငါက တရားဝင်လောင်းကစားသမားဖြစ်ပြီလို့ ပြောတာ။
ချက်တီ - (မျက်စိနှစ်လုံးပွင့်လာပြီး ပြောရန်) ဟေ့ကောင်တွေ တရားဝင်တာတွေ တရားမ၀င်တာတွေ ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေတာလဲ။ လောင်းကစားလုပ်တယ်ဆိုတာ မကောင်းတာလုပ်တာပဲ။ မကောင်းတာလုပ်ပြီး လူကြားကောင်းအောင် ငါလုပ်တာ တရားဝင်ပါတယ် တရားဝင်ပါတယ် ထထ အော်နေလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။
ရှက်ကီ - ဟုတ်ပါပြီကွာ ချက်တီ .. ချက်တာကရော ကောင်းတာလုပ်တာလား မကောင်းတာလုပ်တာလား။
ချက်တီ - ဒီလို ငါ့ကို ပြန်ပြန်မမေးနဲ့ကွာ။ ငါပြောတာနားထောင်။ ငါပြောသလိုလိုက်လုပ်။ ငါ့ကိုပြန်မပြောနဲ့။ ငါ့ကို ဘုမတောနဲ့။ မင်းကို အချိန်မရွေး ဖြုတ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ် နားလည်လား။ ဒါ .. ငါတို့ အဖိုးကြီးရဲ့ ပေါ်လစီပဲ။
ဘတ်တီ - ဘယ်က အဖိုးကြီးလဲ ။
ချက်တီ - မင်းကလဲကွာ .. ငါတို့ လမ်းထဲက ဘုရင်ရူးရူးနေတဲ့ အဖိုးကြီးလေ ..။
ရှက်ကီ - ဒါနဲ့ ချက်တီ .. မင်းက ရန်ကုန်က မဟုတ်ဘူးဆို။
ချက်တီ - အေး .. ငါက နေပြည်တော်ကလာတာ ... ။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 4:39 AM0comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 4:27 AM 1 comments
အလွမ်း ဆိုတဲ့ တေးသွားသက်သက်တွေချည်း
ဂစ်တာကို ပွေ့ဖက်ထားတဲ့ လက်တွေကိုဖြန့်
သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့နဲ့ ခုန်ဆင်းလာမယ့် စကားပန်းပွင့်လေးကို မျှော်
စကားပင်ကြီးအောက်မှာ ကျွန်တော်ထိုင်နေတယ် ... ။
အိပ်မက်တွေ လွယ်လွယ်နဲ့ မက်ခဲ့ပေမယ့်
ဟောဟို အရုဏ်ဦးရဲ့ မှိန်ပျပျအလင်းထဲ
မသေချာမှုတွေ ထိုးခွဲဝင်ရောက်လာတဲ့ မနက်ခင်းမှာ
အိပ်စက်ခြင်းဘာသာစကားကို ကျွန်တော်မေ့လျော့ခဲ့တယ် ... ။
သွားတက်ကလေးနဲ့ ပြုံးပြတတ်တဲ့ နတ်သမီး အိပ်ပျော်နေရော့မယ်
ဟယ်လိုဆိုတဲ့ ဖုန်းထူးသံလေးအောက် ဆောက်တည်ရာမရခဲ့တဲ့ ရင်ခုန်သံတွေရယ်
စတော်ဘယ်ရီအတူသောက်ရင်း ပြန်ဆုံခဲ့ရတဲ့ ညနေခင်းရယ်
ကြယ်တွေရေရင်း သက်ပြင်းချခဲ့ရတဲ့ ညရယ်
ကမ္ဘာဦးလူ အလင်းကို မျှော်သလို
ပြန်ဆုံမယ့်နေ့ကို ကျွန်တော် အော်ခေါ်နေမိတယ်... ။
အဝေးကြီးက ပျံလာမယ့် စကားပန်းတစ်ပွင့်ကို ငံ့လင့်
ကျွန်တော့်မျှော်လင့်ချက်တွေ အတောင်ပံလွှင့်ဆဲ ... ။
မနက် ၃နာရီ ၂၅မိနစ်
၂၉ရက် မေလ၊ ၂၀၀၇
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 3:28 AM4comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 2:02 AM0comments
“ဟိုအရင်ကလိုပဲ မင်းရဲ့အနားမှာ ရှိချင်တာ... ဒီလိုနဲ့ပဲ သစ်ရွက်ကလေးတွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေ...”
သီချင်းသံက အဆက်မပြတ်ထွက်လာ နေတယ်။ ဟိုအရင်ကလိုပဲ နင့်မျက်နှာလေးကို ငေးမောပြီး နင့်အနားမှာ ငါထိုင်နေချင်တာ။ နင်ဟာ ငါ့ဘ၀တဆစ်ချိုးမှာ တိတ်တခိုးဝင်ရောက်လာတဲ့ စကားပန်းတစ်ပွင့်။ နင့်ကိုငါ လွမ်းဆွတ်ပြီး တစ်ယောက်တည်း အတွေးတွေ ရွက်လွှင့်နေဆဲ။ ညို့လိုက်မှိုင်းလိုက်နဲ့ ရွာမယောင် ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့မိုးကို မျှော်လင့်တကြီး စောင့်ရသလိုမျိုး နင့်ကိုငါ နေ့စဉ်ရက်ဆက် စောင့်နေခဲ့တာ နင်သိပါ့မလား။ “လွမ်းတယ် မောင်ရယ်” လို့ နင့်နှုတ်ခမ်းဖျားက တိုးတိုးလေးထွက်ကျလာတတ်တဲ့ စကားသံလေးတွေ ငါ့နားထဲ ပဲ့တင်ခတ်နေတုန်းပဲ။ အမြဲလိုလို ရုတ်တရက် ပြိုင်တူ ပြောမိတတ်ကြတဲ့ ငါတို့နှစ်ယောက်မှာ ဘယ်လို စိတ်ချင်းဆက်သွယ်မှုတွေ ရှိနေမယ်လို့ နင်ထင်သလဲ။
“မလာပါနဲ့ ငါလျှောက်မယ့် ဘ၀ခရီးကြမ်းတယ်.. ကြုံတွေ့မယ့် အခက်အခဲဒုက္ခကျောက်ဆောင် မင်းရင်ဆိုင်ဖို့ခက်မယ်....မလာပါနဲ့ အချစ်ရေ မလာခဲ့နဲ့... ”
သီချင်း နောက်တစ်ပုဒ်ပြောင်းသွားပြီပဲ။ ငါကိုယ်တိုင်က နင့်ကို ငါနဲ့အတူ ရှိနေစေချင်မှတော့ မလာနဲ့လို့ နင့်ကို ငါဘယ်ပြောရက်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် ရှေ့ခရီးက အန္တရာယ်လှိုင်းတွေ ထန်ကောင်း ထန်မယ်။ အဆင်မပြေမှု မုန်တိုင်းတွေ လာကောင်း လာမယ်။ ဒုက္ခကျောက်ဆောင်တွေ ရှိကောင်း ရှိမယ်။ အဲဒါတွေကို ငါနဲ့အတူ ရင်ဆိုင်ဖို့ နင့်ကို လာခဲ့ဖို့ ခေါ်ခဲ့တာ ငါ သိပ်များ တကိုယ်ကောင်းဆန်လွန်း နေသလား။ အမှန်က တစ်ယောက်တည်း နင်မရှိဘဲ ရင်ဆိုင်ရတာထက် နင့်အတွက် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ နင့်လက်ကို ကိုင်ဆွဲပြီး အရာရာကို နှစ်ယောက်အတူ ဖြစ်ချင်တာဖြစ် ရင်ဆိုင်ပစ်လိုက်ချင်တာ။ ငါ စိတ်ကူးယဉ်နေတာ မဟုတ်ဘူးလို့ နင့်အပြုံးလေးနဲ့ ငါ့ကို နှစ်သိမ့်ဦးမလား။ ငါ့ စိတ်ကူးတွေ ရိုင်းနေပြီ ဆိုတဲ့ စကားကို ဟိုးအရင် ငါ့ခံစားချက်တွေ ကသောင်းကနင်း ဖြစ်တုန်းက နင့်ကို ပြောဖူးတာ သတိရတယ်။
“Hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky. Believe me I can fly. I'm proud that I can fly...”
ဒီသီချင်းကို နင် မှတ်မိသေးလား။ ဒီသီချင်းနဲ့ ငါရဲ့ အိပ်မက်တွေကို နင်ကိုယ်တိုင် အတောင်ပံတွေ တပ်ပေးခဲ့တာလေ။ ငါ့ပခုံးပေါ်မှာ မှီနွဲ့ပြီး မှေးစက်ဖူးတဲ့ နင့်ပါးမို့မို့လေးတွေကို ငါအဝေးက လှမ်းပြီး နမ်းနေမိတယ်။ နင် လန့်နိုးသွားမှာ စိုးလို့ ထုံကျင်နေတဲ့ လက်တွေကို မလှုပ်မယှက်ဘဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးထားခဲ့ဖူးတာ အမှတ်ရဆဲ။ “ကျွန်မရဲ့ကဗျာဆရာ” ဆိုပြီး နင်ရေးပေးဖူးတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးတစ်ပုဒ်ကို နင့်ကို သတိရတိုင်း ပြန်ပြန်ဖတ်မိတယ်။ နှစ်ယောက်အတူ တွဲရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း ပြန်ကြည့်မိတာ ခဏခဏပဲ။ ငါ့အခန်းနံရံမှာ ကပ်ထားတဲ့ နင့်ဓာတ်ပုံတွေဘာလိုလိုနဲ့ အတော်လေးများနေပြီ။
“I give my hand to you with all my heart. Can't wait to live my life with you, can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you...”
ငါ့နံရိုးတစ်ချောင်းကို ထုတ်ပြီး နင်အဖြစ် ဖန်ဆင်းခဲ့တာမှ ဟုတ်ရဲ့လား။ တကယ်က ငါ့အိပ်မက်တွေကို နင်အဖြစ် ဖန်ဆင်းခဲ့တာ ဖြစ်မယ်။ မကြာတော့တဲ့ အချိန်ကာလမှာ အရင်လို ငါ့ဘေးမှာ နင်အတူ ရှိနေတော့မယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဘယ်တော့မှန်းမသိတဲ့ အဲဒီနေ့ကို ငါ စောင့်နေဆဲ။ ငါတို့ နှစ်ယောက် အမြဲမခွဲစတမ်း အိပ်မက်လမ်းတွေထဲ ပျံသန်းသွားကြရအောင်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 6:37 AM2comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 3:30 AM3comments
ဟိုးအရင်က ပေါ်ပြူလာဂျာနယ်မှာ အပတ်စဉ်စောင့်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာချစ်ဦးညိုရဲ့ “သမိုင်းမတွင်ပေမယ့် သမိုင်းဝင်နေတဲ့စကားများ” ဆောင်းပါးတွေကို စုစည်းဖော်ပြထားတဲ့ ဒီစာအုပ်လေးဟာ မဖတ်ရသေးသူတွေ အတွက် ဗဟုသုတရစေနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ မြန်မာ့သမိုင်းထဲက ထင်ရှားတဲ့ ဖြစ်ရပ်တချို့နဲ့ သမိုင်းဝင် ထင်ရှားတဲ့ စကားတွေရဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ဖတ်ရမှာပါ။
“ကျွန်၏ တိုင်ပင်ခြင်းလော၊ မင်း၏ တိုင်ပင်ခြင်းလော၊ ပညာရှိတို့၏ တိုင်ပင်ခြင်းလော” (၀န်ဇင်းမင်းရာဇာ)
“မိဖုရားကို ငါမနှမြော၊ သင်းကိုသာ ငါနှမြောသည်” (ရာဇာဓိရာဇ်)
“တို့သခင်စိတ်တော်ကိုသာ စမ်းသည်၊ ချစ်သနားတော်မူသည် မှန်၏” (လဂွန်းအိမ်)
ဒီနေရာကနေ Download လုပ်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Alternative Download Link : Download Here
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 2:40 AM2comments
ကျွန်တော် သတ်ပုံမှားတဲ့ညထဲ အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်နေပါသည်။
ကျွန်တော့် အနားမှာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ပါ။
ကျွန်တော့် အတွေးမှာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့ပါ။
ကျွန်တော့် စိတ်ကူးမှာ ဘောင်တွေကို ရိုက်ချိုးခဲ့ပြီ။
ကျွန်တော့် အာရုံမှာ ရန်လိုမှုတွေကို ဥပက္ခောပြုခဲ့ပြီ။
ကျွန်တော့် အဇ္ဈတ္တမှာ စိတ်ပျက်ခြင်း ဒီရေ တရိပ်ရိပ်တက်ခဲ့ပြီ။
ကျွန်တော် သူများလမ်းချော်နေသည်ဟု ထင်လည်း ၀င်ပြောမည် မဟုတ်တော့။
ကျွန်တော် လမ်းချော်နေသည်ဟု သူများက ထင်လျှင်လည်း ထိုအထင်သည် အထင်သက်သက်သာ ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ပြောရန် မလိုတော့။
ကျွန်တော် ၀မ်းချစရာ ပျားရည်လက်ကျန်လည်း မရှိတော့။
ကျွန်တော် ကြားနေရသော စကားတွေမှာ ဇာတိပြသံတွေကြားနေရတာ မဆန်းတော့။
ကျွန်တော် ဆုပ်မထားသော လက်သီးဖြင့် ကြိုးဝိုင်းထဲ မ၀င်လိုတော့။
ကျွန်တော် ချုပ်မထားသော ကြိုးဖြင့် အချည်မခံလိုတော့။
ကျွန်တော် မလိုက်လိုသူများကို လိုက်ခဲ့ဟုခေါ်ရန် ဆန္ဒကုန်ခမ်းခဲ့ပြီ။
ကျွန်တော် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ရန်ဖြစ်ခြင်းကို သဲသဲကွဲကွဲ မသိသူများကို ထားခဲ့ပြီ။
ကျွန်တော် လေတချွန်ချွန်ဖြင့် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဆက်လျှောက်ခဲ့ပြီ။
ကျွန်တော် ကိုယ်ရေးချင်ရာ ဆက်ရေးပါမည်။
ကျွန်တော် ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ဆက်ရေးမည်။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 7:23 PM2comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 1:00 AM5comments
မျက်နှာဖုံးတစ်ခုအောက်က မျက်လုံးတစ်စုံဟာ ငါ
မွန်းကြပ်နေတဲ့ အသက်ရှူသံခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ဟာ ငါ
ဆူဆူညံညံ အော်ဟစ်နေတဲ့ ပေါက်ကွဲသံစဉ်တွေကြားက
ငါနဲ့ ငါအကြား ဗျာများနေဆဲငါ
ငါဟာ ငါကိုယ်တိုင် မုန်းတီးတဲ့
ငါဟာ ငါကိုယ်တိုင် စက်ဆုပ်တဲ့
ငါဟာ ငါကိုယ်တိုင် ကြည့်မရတဲ့
ငါဟာ ငါကိုယ်တိုင် ရွံရှာတဲ့
ငါဟာ ငါကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းမကျတဲ့
ငါဟာ ငါကိုယ်တိုင် မဟုတ်တဲ့
ငါဟာ ငါကိုယ်တိုင် ခဏခဏ ပြန်မငုံ့ကြည့်ချင်တဲ့ ငါသာ ဖြစ်တယ်.. ။ ။
မေလ ၁၇ရက် ၂၀၀၇
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 6:07 AM 1 comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 2:55 AM 1 comments
အမှောင်ထဲမှာ အမှောင်ကို မြင်မြင်နေရတာ
အလင်းထဲမှာ အမှောင်ကို မြင်မြင်နေရတာတော့ ဆိုးတယ်
ချောက်ထဲက ဘ၀တွေကို အားမနာ ပါးမနာ
မြဲမြဲဆုပ်ခံထားရတဲ့ ခုံတွေကို သနားတယ်
မြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ လက်တွေကို သနားတယ်
ငရဲတံခါးကတော့ ပိတ်ကို မပိတ်တော့ဘူး...။ ။
မေလ ၁၁ရက် ၂၀၀၇
ဆရာမင်းလူရေးတဲ့ တက္ကသိုလ်ဇာတ်လမ်းတွေကို ဟိုးတုန်းကတည်းက ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တာ။ အမုန်းအလိုမရှိကလည်း ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
တက္ကသိုလ်အနုပညာအသင်း၊ ပန်းချီခန်းမ၊ နံရံကပ်စာစောင်တွေ၊ ပြီးတော့ “လတ်သခင်” ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး.. အားလုံးက စိတ်ကူးယဉ်စရာတွေချည်းပဲ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အဲဒီလို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘ၀ကို မျှော်လင့်အိပ်မက်ခဲ့တာ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအိပ်မက်တွေ ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဗျာ။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတဲ့နောက် ကျွန်တော် စင်္ကာပူကို ရောက်လာခဲ့တယ်လေ။
ကျွန်တော် ကြိုက်လွန်းလို့ သုံးခေါက်ထက်မက ပိုဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်အတော်နည်းပါတယ်။ အမုန်းအလိုမရှိကို ဘယ်နှစ်ခေါက်ဖတ်ပြီးပြီဆိုတာ ရေလို့မရတော့ဘူးဗျ.. :)
ခင်ဗျားတို့ ဖတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဟောဒီကနေ Download [File Size: 2.31MB] လုပ်ပါ။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 1:40 AM3comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 2:47 AM0comments
သင်္ကြန်အပြီး မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ ရွှေတိဂုံဘုရားကို သူမနှင့်အတူ သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားပေါ်မှာ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ ထုံးစံအတိုင်း လူများက ပျားပန်းခတ်မျှ စည်ကားနေပါတယ်။
ဘုရားပေါ်မှာ ရိုက်ဖြစ်တဲ့ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံတွေထဲက တချို့ပါ...
ဒါကတော့ ဘုရားပေါ်က အဆင်းမှာ တွေ့ရလို့ ရိုက်ထားတာပါ..
ဘုရားဖူးပြီး ကြည်နူးလာတဲ့ အာရုံလေးတောင် ဘယ်ပျောက်သွားမှန်းမသိတော့ဘူး ..
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 11:30 PM2comments
သံလွင်အိပ်မက် အမှတ်(၁၀) အတွက် သုံးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး ဒီဇိုင်းတောင်လုပ်ပြီးခဲ့ပေမယ့် သင်္ကြန်ကဗျာတစ်ပုဒ် နောက်ထပ်ရေးဖြစ်ပြီး မသုံးဖြစ်ဘဲ ချန်ထားဖြစ်တဲ့ ကဗျာလေးပါ။ သူမရယ် သူမရဲ့ကဗျာဆရာရယ် အတူတူရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ဆိုပါတော့...
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 11:54 PM 1 comments
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 10:14 PM0comments
၂၀၀၇ ရန်ကုန်သင်္ကြန်မှာ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေထဲက တချို့ပါ..
ပြန်ပြီး မကဲလိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက် အလွမ်းပြေပေါ့ဗျာ..
၂၀၀၇ သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံများ (၂) နဲ့ (၃) ကို ဆက်လက် တင်ပေးပါမယ်။ မကြာမီမျှော် ...
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 12:14 AM 1 comments
ချမ်းမင်းအိမ်၊ ပေါ်ဦးသစ်၊ ၀ိုင်ချိုတို့ရဲ့ “ရှုမျှော်ရာလမ်း” ကဗျာစာအုပ်ထဲက ကြိုက်လို့အခေါက်ခေါက်အခါခါ ဖတ်မိခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ဖတ်ဖတ်ချင်းတော့ ဘာမှန်းမသိဘူး။ လက်တွေရှုပ်နေတာပဲပေါ့။ ဖတ်ရင်း အဆုံးနား ရောက်တော့မှ သဘောပေါက်တော့တယ်။ မတူညီတဲ့ လက်နှစ်ဖက် ပေါင်းစပ်သွားလိုက်ကြပုံကို ကဗျာဆရာ ၀ိုင်ချိုရေးဖွဲ့ထားပုံက သိမ်မွေ့လွန်းလှတယ်.. ။ မကြာခင် ဇွန်လ ၁၂ရက်မှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး လက်နှစ်ဖက်အတူ ပေါင်းစပ်ကာ လက်ထပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းစုံတွဲအတွက် အမှတ်တရ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လား.. အသိသက်သေအဖြစ် လက်မှတ်လိုက်ထိုးပေးမယ်လေ။ ဒါမျိုးဆိုတာ ကူညီကောင်းတယ် မဟုတ်လား။ ကျွန်တော့်အလှည့်ကျရင်တော့ ဘယ်သူတွေကိုများ အကူအညီတောင်းရမှာပါလိမ့်။ ကူညီလိုသူများ စာရင်းစတင်ပေးနိုင်ပါပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း ...
လက်တစ်ဖက်မှာ လက်ထိပ်နာရတဲ့ ယခု
လက်တစ်ဖက်နဲ့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ လက်မှတ်ထိုးတယ်
လက်တစ်ဖက်နဲ့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ လက်ထပ်တယ်
လက်တစ်ဖက်နဲ့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ လက်ချင်းချိတ်
လက်တစ်ဖက်ကို လက်တစ်ဖက်က လက်ဆုပ်လက်ကိုင်
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 9:32 PM3comments
ရန်ကုန်မှာ ဒီအချိန်ဆို ည ၁၂နာရီ ရှိပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း မီးပျက်နေမယ် ထင်တယ်။ သူမ ပြောသလို ၂၄နာရီ မဟုတ်ဘဲ ၂ရက် ၄နာရီ မီးလာနေပြီဆိုလား။ အမှောင်ထဲမှာ ကျွန်တော့်ကိုများ သူမ သတိတရရှိနေမလား။ ဒါနဲ့ပဲ ဟောဒီ ကဗျာကို ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ သြော်.. ကဗျာ မရေးခင် .. မီးတွေ အားလုံး ပိတ်ပြီး အမှောင်ချပစ်လိုက်တယ် ဆိုတာ ပြောဖို့ မေ့တော့မလို့ .. ။
နင်ရေးပေးတဲ့ စာတွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်တယ်
နင်ပေးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေး ပြန်ထုတ်ကြည့်တယ်
နင်နဲ့အတူ နေ့ရက်တွေကို ပြန်တွေးကြည့်တယ်
နင့်အပြုံး ခပ်လဲ့လဲ့ကို သတိရတယ်
နင့်စကား ခပ်လွင်လွင်ကို တမ်းတတယ်
မျက်စိကိုမှိတ် မီးတွေ ပိတ်ပြီး
Big Bag သီချင်းတွေချည်း လှိမ့်နားထောင်နေလိုက်တယ်
ဂျီတော့ခ် ချက်လော့ဂ်* ထဲမှာ နင့်စကားလုံးတွေရှိတယ်
ရင်ဘတ်ထဲမှာ နင့်အနမ်းနဲ့ လှုပ်နှိုးခဲ့တဲ့ နှလုံးသားရှိတယ်
ဘလော့ဂ်*ထဲမှာ နင့်ကို အလွမ်းပြေမလားလို့ ရေးထားတာတွေရှိတယ်
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ dc* ဖြစ်နေတဲ့ ငါကလွဲရင်ပေါ့လေ။ ။
မေလ ၁ရက်၊ ၂၀၀၇
ဒေါင်းလုပ် = download
ဂျီတော့ခ်ချက်လော့ဂ် = G-talk Chat Log
ဘလော့ဂ် = Blog
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 2:27 AM0comments